अंग प्रत्यारोपण गराएकासँग हारे डाक्टर - Health Today Nepal
अंग प्रत्यारोपण गराएकासँग हारे डाक्टर
April 14th, 2017 समाचार0comments
अंग प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिहरु र तिनको अंग प्रत्यारोपण गर्नमा संलग्न चिकित्सक टीम बिच भएको मैत्रीपूर्ण फुटवल प्रतियोगितामा प्रत्यारोपण गराएकाहरुको टीमले चिकित्सकहरुको टीमलाई सून्यका विरुद्घ १ गोलले जित हासिल गरेका छन् ।
नयाँ वर्षको अवसरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र आरोग्य प्रतिष्ठानले लगनखेलमा शुक्रबार आयोजना गरेको आठौं नेपाल प्रत्यारोपण खेलकुलमा प्रत्यारोपीत समूहले बिजय हासिल गरेको हो । प्रतियोगितामा अंग प्रत्यारोपीत समूहमा मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपण गराएका व्यक्तिहरु सहभागी थिए भने चिकित्सकको समूहमा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, नेफ्रोलोजिस्ट र प्रत्यारोपण सर्जन सहभागी थिए । अंग प्रत्यारापितहरु सक्षम र उत्पादनशील जीवन यापन गर्न योग्य छन् भन्ने सन्देश दिन र अंगदाताहरुको मनोबल उच्च राख्न यो प्रतियोगिता विगत ८ बर्षदेखि आयोजना गरिदैं आएको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बताए । यस किसिमको प्रतियोगिताले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उनले बताए । फुटवलका अलावा प्रतियोगितामा दौड र व्याटमिन्टनको समेत अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
अंग प्रत्यारोपितहरुको पुरुषतर्फ १०० मिटर, २०० मिटर र ४०० मिटर दौड, महिलातर्फ १०० मिटर र २०० मिटर दौड तथा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता गराइएको छ । पुरुष १०० मिटर दौड तर्फ बिष्णुलाल श्रेष्ठ प्रथम, हरिबहादुर तामाङ्ग दोश्रो र रुलबहादुर आले तेश्रो भएका थिए । त्यसैगरि पुरुष २०० मिटर दौड तर्फ बिष्णु लाल श्रेष्ठ प्रथम, प्रेमरत्न मानन्धर दोश्रो तथा स्वजन मानन्धर तेश्रो भएका थिए । त्यसै गरि पुरुष ४०० मिटर दौडतर्फ प्रेमरत्न मानन्धर प्रथम, हरिबहादुर तामाङ्ग दोश्रो र रुलबहादुर आले तेश्रो भएका थिए ।
महिला १०० मिटर दौड तर्फ गीता श्रेष्ठ प्रथम, तुलसा भट्टराई दोश्रो र सानुशोभा शाक्य तेश्रो भएका थिए । त्यसै गरि महिला २०० मिटर दौड तर्फ गीताश्रेष्ठ प्रथम, तुलसा भट्टराई दोश्रो र सानुशोभा शाक्य तेश्रो भएका थिए । ब्याडमिन्टन तर्फ पुरुष भेटरान (४५ बर्ष भन्दामाथि) को समुहमा प्रेमरत्न मानन्धर प्रथम, बिष्णुलाल श्रेष्ठ दोश्रो र राजेश्वर कायस्थ तेश्रो भएका थिए । त्यसै गरी पुरुष ४५ बर्षभन्दा मुनिको उमेर समुहमा हरिबहादुर तामाङ्ग प्रथम, राजकुमार लिम्बु दोश्रो तथा रुद्रबहादुर बिक तेश्रो भएको थिए ।
महिला ब्याडमिन्टनतर्फ लिला गुरुङ्ग प्रथम, लक्ष्मी महर्जन दोश्रो तथा गीता श्रेष्ठ तेश्रो भएका थिए । यस पटकको बिजयीमध्येबाट दुई जना प्रत्यारोपितलाई यसै बर्षको जुन महिनामा स्पेनको मालागामा आयोजना हुने विश्वप्रत्यारोपण खेलकुदमा सहभागी गराईने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । समारोहमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपालीले प्रत्यारोपितहरुलाई शिपमुलक तालिम दिई उत्पादनशील नागरिक बनाउन सहयोग गर्ने बताए । प्रतियागितामा सुप्रसिद्ध गायीका एवं आरोग्य प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष आनी छोईङ्ग डोल्मा, सभासद प्रेम सुवाललगायत वरिष्ठ चिकित्सक, समाजसेवी र राजनीतज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो । सोही समारोहमा मृगौला प्रत्यारोपित खेमराज निरौलाद्धारा लिखित पुस्तक “जीवनको खोजीमा” विमोचन गरिएको थियो ।
Previous article नयाँ वर्षमा ‘म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ्य’
Next article एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका ६ बुँदा